I-Blue World Dharavandhoo - I-Airbnb
I-Blue World Dharavandhoo
Igumbi lakho lokulala e indawo yokuhlala nenesidlo sakusasa sinombuki zindwendwe onguFaisal
I-Blue Dharavandhoo ime eBa atoll kumgama wemizuzu eyi-15 kuphela yokuhamba ngesikhephe ukusuka eHanifaru Bay edumileyo. Kule ndawo ikhuselwe elwandle, ukubukwa okumangalisayo kwe-manta ray ukususela ngoAprili ukuya kuNovemba kuxhaphake kakhulu.
Indlu yeendwendwe ngokwayo inee-bungalows eziyi-4, ivenkile yokutyela encinci kunye nendawo yokudayiva. Ukuze ufike eDharavandhoo siza kukwazi ukukubhukishela uhambo ngenqwelo-moya lwasekuhlaleni, ngeendleko ze-200 $ zokuhamba ngenqwelo-moya eziya eFlorida.
Kukho i-12 pesenti eyongezelelweyo yeRhafu yokuThengisa kunye ne-10 pesenti yeenkonzo.
Indlu yeendwendwe ‘i-Blue World Dharavandhoo' inikezela ngee-bungalows ezineendawo ezivulekileyo nezitofotofo ezinegumbi lokuhlambela kunye nomatshini okhupha umoya obandayo okanye oshushu. Le ndawo iphinde yandise ubutofotofo obuphezulu bezindlu zethu ezinevaranda eziqaqambileyo, ngenxa yeefestile ezinkulu ezijonge kwindawo yethu yokuphumla, evulekele zonke iindwendwe zethu.
Umbuki zindwendwe ngu- Faisal